Inye Onyinye Maka Ọrụ Zuru Ụwa Ọnụ nke Ndịàmà Jehova
JEHOVA bụ Chineke na-emesapụ aka. (Jems 1:17) Ihe niile Jehova kere na-egosi na ọ na-emesapụ aka, ma kpakpando ndị na-eju na mbara igwe n’abalị ma osisi ndị juru n’ụwa.—Ọma 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.
Otú obi si dị́ Devid ụtọ maka ihe Chineke kere mere ka o dee abụ iji too ọrụ aka Jehova. Gụọ Abụ Ọma nke 104, ka ị hụ ma ọ̀ bụ na obi agaghị adị gị otú ọ dị ya. Devid dere, sị: “M ga-abụku Jehova abụ n’oge niile m dị ndụ; m ga-abụku Jehova abụ olu ụtọ n’oge ndụ m niile.” (Ọma 104:33) Ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị gị?
ONYE KACHA EMESAPỤ AKA
Jehova chọrọ ka anyị na-emesapụ aka otú ahụ ọ na-eme. Ọ gwakwara anyị ihe mere anyị ga-eji na-emesapụ aka. Buru n’obi ihe Pọl onyeozi si n’ike mmụọ nsọ dee. Ọ sịrị: “Na-enye ndị bara ọgaranya n’usoro ihe dị ugbu a iwu ka ha ghara inwe anya dị elu, ka ha nweekwa olileanya, ọ bụghị n’akụnụba ndị a na-ejighị n’aka, kama n’ebe Chineke nọ bụ́ onye na-enye anyị ihe niile n’ụba ka anyị wee nwee ọṅụ; ka ha na-arụ ọrụ ọma, ka ha bụrụ ọgaranya n’ezi ọrụ, ka ha na-emesapụ aka, ka ha dịrị njikere inye ndị ọzọ ihe, ka ha na-atọrọ onwe ha ezi ntọala maka ọdịnihu dị ka akụ̀ n’ebe ihe ọ bụla na-agaghị eme ya, ka ha wee jidesie aka ike ná ndụ ahụ nke bụ́ ndụ n’ezie.”—1 Tim. 6:17-19.
Mgbe Pọl degaara ọgbakọ dị́ na Kọrịnt akwụkwọ ozi nke abụọ, o kwusiri ike banyere otú anyị kwesịrị isi na-ele inye onyinye anya. Ọ sịrị: “Ka onye ọ bụla nye dị ka o kpebiri n’obi ya, ọ bụghị ná mwute ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.” (2 Kọr. 9:7) Pọl kwukwara ndị imesapụ aka na-abara uru. Nke mbụ bụ onye e nyere onyinye, bụ́ onye e gboro mkpa ya. Nke abụọ abụrụ onye nyere onyinye, ya bụ, onye Chineke ga-agọzi nke ukwuu.—2 Kọr. 9:11-14.
Ihe ikpeazụ Pọl kwuru banyere onyinye n’akwụkwọ ozi ahụ bụ ihe kacha gosi na Chineke na-emesapụ aka. Ọ sịrị: “Ekele dịrị Chineke maka onyinye ya a na-apụghị ịkọwa akọwa nke ọ na-enye n’efu.” (2 Kọr. 9:15) O doro anya na ihe só n’onyinye Pọl kwuru okwu ya bụ ihe ọma niile Chineke si n’aka Jizọs Kraịst na-emere ndị ya. Uru ọ bara abụghị ihe e ji ọnụ akọ.
Olee otú anyị ga-esi gosi na obi dị anyị ụtọ maka ihe niile Jehova na Ọkpara ya meere anyị nakwa ihe ndị ha ga-emere anyị n’ọdịnihu? Otu ụzọ bụ iji oge anyị, ike anyị, na akụ̀ anyị na-akwado ofufe Jehova, ma ihe anyị ga-emeli ọ̀ dị ntakịrị ma ò buru ibu.—1 Ihe 22:14; 29:3-5; Luk 21:1-4.
E wezụga inye onyinye ego na ihe ndị ọzọ e nwere ike ireta ego, e nwere ụzọ ndị ọzọ e nwere ike isi nye ihe iji kwado ozi Alaeze nke a na-eje n’ụwa niile. E dere ha n’okpuru ebe a. N’agbanyeghị nke ị họọrọ, biko buru ụzọ kpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba i bi ka i nwee ike ịmata nke iwu kwadoro ná mba ahụ. Ebe ọ bụ na mba ọ bụla nwere iwu nke ha, mmadụ kwesịrị ibu ụzọ jụọ ndị ọkàiwu tupu ya ahọrọ ụzọ kacha mma ọ ga-esi nye onyinye.
Dị ka okwu ahụ bụ́ “atụmatụ ọrụ ebere” na-egosi, onye chọrọ inye ụdị onyinye a kwesịrị ime atụmatụ nke ọma.
Ị chọọ ịmatakwu ụzọ ndị e si enye onyinye, i nwere ike ịkpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba i bi.
mailto:?body=Gosi na Obi Dị Gị Ụtọ Maka Otú Jehova Si Emesapụ Aka%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015850%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gosi na Obi Dị Gị Ụtọ Maka Otú Jehova Si Emesapụ Aka